Forum (OR) တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » Forum (OR) တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမား
Forum (OR) တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမား
Posted by တိမ်မည်း on Apr 16, 2013 in Community & Society | 23 comments
တိတ်တဆိတ် လူသတ်နိုင်သော လက်ချောင်းလေးများ
အတက်နေ့သူများတွေကတော့ ကဲကြပေါ့… ကျွန်တော်ကတော့ ခရီးတခုသွားဖို့ ရှိလို့အိမ်မှာပဲအောင်းနေလေရဲ့…. ပျင်းသလိုလိုရှိတာနဲ့အသစ်ဝယ်လာတဲ့ အခွေတွေထဲက တခုကို ကြည့်မိပါတယ်… တမြန်တရက်က ကျော်ကြည့်ပါသေးတယ်…. ဂရပ်ဖစ် များများနဲ့စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်ကား ပေါပေါ တခုလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်…. ဒီနေ့ တော့ အချိန်လည်းရလို့ဆယ်မိနစ်လောက် သည်းခံကြည့်မိတာကနေ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ကားမှန်းသိလိုက်ရတာပါ… ဘယ်နားကောင်းလည်းလို့ ပြောရင် ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပါ…. တချို့ အချက်အလက်တွေက စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းအားကြီးပေမဲ့ ဒါရိုက်တာပြချင်တဲ့ ပွိုင့်ကိုတော့ တကယ်ရောက်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်…. ဇာတ်ကား နာမည်လေးက “BBS Silent Code” ပါ…. အဲ့ကားလေးဟာ ငါးဆယ့်ငါးကြိမ်မြောက် အာရှ ပစိဖိတ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ဒါရိုက်တာအသစ်လက်ရာအနေနဲ့အဖွင့်ပြသတဲ့ ငါးကား စာရင်းမှာလည်း ၀င်ခဲ့ပါတယ်…. ဇာတ်ကား ရဲ့လိုရင်းကတော့ BBS (Bulletin Board System) တွေကနေတဆင့် လူတယောက် အသက် လူတယောက် ဘ၀ ပျက်မလို ဖြစ်နေရာကနေ အသည်းအသန် ပြန်ကယ်ရတာကို အကွက်ကျကျ ရိုက်ပြထားတာပါ….. ဇာတ်လမ်း ကြော်ငြာကတော့….
လန်လို့ ခေါ်တဲ့ နာမည်ပြောင်(Blue) ဆိုတဲ့ သတင်းထောက်မလေးဟာ လောကကြီးရဲ့ အဖြစ်မှန်တွေကို သေချာထောက်လှမ်းပြီး အဖြစ်မှန်ကိုသာရေးဖို့ အာသီသ ရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် သူရဲ့ အယ်ဒီတာကတော့ မတူတဲ့ အမြင်ရှိပါတယ်… အဲ့ဒါကတော့ အင်တာနက်က အတင်းအဖျင်းတွေပေါ်မတူတည်ပြီး သတင်းရေးဖို့ ပါပဲ… မထင်မှတ်ပဲ လန်ဟာ BBS ဆိုတဲ့ မန်ဘာပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး ဖိုရမ်တခုကို တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်… လန်ဟာ မန်ဘာတဦးအနေနဲ့Dream Board ပိုင်ရှင် ရှန် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်… ရှန် ဟာ Dream Board ကိုဖန်တီးခဲ့တာဟာ လူတွေရဲ့ အကြံတွေ အိမ်မက်တွေကို မျှဝေဖို့ ပါ… ရှန် ရဲ့ စိတ်ကောင်း မည်သို့ ပင် ရှိစေ Public သို့ပြန့် နှံ့ သွားတဲ့ Video ဖိုင်တခုကြောင့် သူဟာ လူအများရဲ့ ငြင်းခုန်စရာ အကြောင်းအရာတခု ဖြစ်လာပါတယ်… လူတချို့ က အင်တာနက်ကနေ တဆင့် တချို့ က ဖုန်းမှ တဆင့် တိုက်ခိုက်ချင်းကို အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရပါတယ်… ထိုအချိန်မှာ ရှန် ဘက်က ဟောင်ဂွေဂျန်ဆိုတဲ့ Computer Engineer တယောက်ကသာ ရပ်တည်ပေးပါတယ်…. ဒါပေမယ့် များပြားလှတဲ့ တိုက်ခိုက်မှူတွေကို တားဆီးနိုင်စွမ်း မရှိခဲ့ပါဖူး…. ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မှူတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှန် ရဲ့ ရီးစားဟောင်း နာမည်ပြောင်-King လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်လေးက လုပ်နေတယ်လို့ ယူဆစရာတွေလည်း ထွတ်ပေါ်လာပါတယ်… သူက နာမည်ကြီး ဟက်ကာ တဦးပါ…. သူသာလျှင် BBS Forum ရဲ့ Moderator Panel ကို ရောက်ရှိနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိသူတဦးပါ… ထို့ သို ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းကလည်း ရှန်က King ကို စတင်လမ်းခွဲခဲ့လိုပါပဲ…. သတင်းထောက်မလေး လန်ဟာ အမှန်တရား ကို အပြင်းအထန်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်…. ရှန် ဒုက္ခရောက်အောင် နောက်ကွယ်ကနေ လုပ်ခဲ့သူ BBS Forum ကြီး တခုလုံး လူသတ်သမား Forum ဖြစ်အောင် နောက်ကစတင် မီးမွေးခဲ့သူ ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ.. ဒါဟာ ဂိမ်းတခုတော့ မဟုတ်ပါဖူး…….
ဇာတ်ကား ကြည့်ချင်သူများအတွက် ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတာတော့ ဆက်မပြောတော့ ဖူးနော်… တကယ်တမ်းက ဘလော့ တခုကနေ အမုန်းတရား တခုကို အပြင်အထိသယ်လာပီး လူတယောက်ဘ၀ကို သေအောင် သတ်သွား နိုင်ကြောင်း ရိုက်ပြထားတာပါ…. ဘလော့ ထဲမှာ ရေးနေတယ်ဆိုပေမယ့်… ကီးဘုတ်ပေါ်က သင်လက်များဟာ လူတယောက်ကို အသာလေး သတ်သွားနိုင်ကြောင်း ရိုက်ပြထားတာ တကယ် သံဝေဂ ရစရာပါပဲ….
ဂဇက် မန်ဘာများကို အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဖူး…..
ဂဇက်မှ မဟုတ်ပါဖူး… ဖေ့ဘွက်.. တွက်တာ… ဂူးဂဲလ်ပလက်… တခြား တခြား Forum များမှာလည်း အတူတူပဲ… တနည်းအားဖြင့် Cyber Bullying ပေါ့……
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် ဖြင့် ပျော်မြူးနိုင်ကြပါစေ…..
လူအခြင်းခြင်း အနိုင်ကျင့်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းလျက်….
တိမ်မည်း (ခေတ္တ လူ့ ပြည်)
ဂေဇက်က ဇါတ်ကောင်ကို ဂေဇက်မှာပဲ ထားပါတယ်ဗျား
အူးပေ ပထမ ကော် မန့် အတွက် ကျေးကျေး
best rigt answer က မှား နှိပ်မိတာ
ဂေဇက်မှာ ထောင်ထောင် ထောင်ထောင် မလုပ်တော့ဘူး..
အဲလောက်ထိလဲ လိုပါဖူး ဆြာရယ်…
သူတို့ က best hacker တွေထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့
ဂလိုဆို ကျုပ်သတ်ခဲ့တဲ့ လူပေါင်းနည်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ဟမ်… ကိုရင်တိမ်မည်းရယ်၊ ဦးကျောက် ဂဇက်မှာ လူလုံးပြမိတာ မှားပြီထင်ပါ့…
မှန်တာပြောရရင် စာရေးမိတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အီးမေးကို ကွန်မန့်ပို့သူတွေရှိလို့…
စာရေးရမှာတောင် တွန့်နေတာ… ခုတော့ “ကျောက်”သွားပြီ… ဟီ ဟိ
တိမ်မည်း က ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ကြော်ငြာဝင်တာပါ
အင်း…. Online Life ဆိုတာ Virtual Fantacy မဟုတ်ဘူးဆိုတာ
ချပြတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်မယ်ထင့် .. (ရှာကြည့်ကြည့်ဦးမယ်ဗျို့..)
Cyber Security တွေ အတော် ကြီး လိုအပ်လာနေကြောင်းလည်း
မီးမောင်းထိုးပြတာလို့ မှတ်ရဲ့…။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရင် ပြန်လာပါဦးမယ်ဗျာ.
ကျုပ်တို့ကတော့ ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ …
ပြချင်တဲ့ အချိန် ပြမယ် …
ကြည့်ချင်တဲ့လူ ကြည့် …
ဒါမယ့် .. တစ်ခုတော့ ရှိသဗျ …
ပြတိုင်းလည်း မကောင်းဘူးဆိုတာ ဟုတ်တယ် …
ပြမိလို့ သေမလောက် ဒုက္ခ ရောက်ရတာလည်း ရှိတယ် …
ဒါတွေ ဆိုင်လား မဆိုင်လား မသိဘူး .. ထားလိုက်ပါဦး ..
ခင်ဗျား ပြောတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ..
ဒါမှ ပိုသိမှာ …
အဲဒီရုပ်ရှင်.. ဘယ်ဂျောင်မှာ.. ဘယ်လိုရှာကြည့်ရမလည်း.. သိချင်တာ..
အဘိဓမ္မာတရားသဘောနားလည်ရင်.. ဖိုရမ်မှာရေးတဲ့စာတွေဟာ.. သုံညနဲ့တစ်.. ဒစ်ဂျစ်တွေပဲဖြစ်တာမို့.. ဖြစ်ရပ်ပျက်(ဥပါဒ်ဌီဘင်)လို့သဘောထား.. တရားပေါက်နိုင်သလို.. ကိလေသာအစွဲတွေလည်း.. ဖြုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..
နိဗ္ဗာန်ဟာ.. ရှာတတ်ရင်.. တလံမျှခန္တာကိုယ်ရဲ့.. လက်ချောင်းလေးတွေမှာပဲရှိနေကြာင်း…
ကိုဂီနဲ့ အူးအံစာတုံး ပြန်မန့်မှာ စောင့်နေပါမယ်ဗျာ
လက်ချောင်းတရားများ ဟောဖို့အစီအစဉ် ရှိလားဟင်
လက်ချောင်းက ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ Fခလုပ်ကိုဖိလိုက်ရင်.. 01ဒစ်ဂျစ်.. 01000110 ဆိုတာကို.. အင်တာနက်ကြိုးတွေကတဆင့်ပို့ပြီး.. ဟိုမှာဖက်ကြည့်နေသူအားလုံးရဲ့မော်နီတာပေါ်မှာ.. F လို့သွားပေါ်တယ်..
အဲဒါလေးကြည့်ပြီး.. F word နဲ့ဆဲတယ်ဆိုပြီး..လူတွေမှာ ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့…
ကမ္ဘာ့တနေရာက.. ကောင်လေးတယောက်လက်ချောင်းက ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ Lv ခလုပ်ကိုဖိလိုက်ရင်.. 01ဒစ်ဂျစ်.. 01000110 01001100 01110110 ဆိုတာကို.. အင်တာနက်ကြိုးတွေကတဆင့်ပို့ပြီး.. ဟိုမှာဖက်ကြည့်နေသူအားလုံးရဲ့မော်နီတာပေါ်မှာ.. Lv လို့သွားပေါ်တယ်..
အဲဒါလေးကြည့်ပြီး.. ကောင်မလေးတယောက်ယောက်ခမြာ.. ပီတိတွေဖြာလို့ညအိပ်မက်လှလှတွေမက်လို့..
အဲ့ဒါ ဇူဇဂါဘောက် ဆိုတဲ့ ဖွဘုတ် ဘောဇိ ပြောသွားတာ..
ဆိုလိုချင်တာက အိုင်ဒန်ဒတီတွေကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ခေတ် ကုန်ပြီလို့ ပြောတာ..
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကို ပြန်သွားရင် ကာတွန်းနဲ့ စကားတခွန်း ခေတ်စားဖူးတာ အမှတ်ရတယ်..
ဘာတဲ့ ..အင်တာနက်မှာ သင်ဟာ ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်မှန်း ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့
အနှီခေတ်တုန်းက အိုင်ဒန်ဒတီ အတုတွေ ဟန်ဆောင်တာတွေ လိမ်ညာတာတွေ ကို
ပေါ်အောင် ဖော်ဖို့ သိပ်ခက်ခဲ့တဲ့ ကာလ ..မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ ကာလ အတုအယောင်တွေ
မင်းမူတဲ့ ကာလပေါ့ဗျာ.. ခက်တာက ယနေ့ခေတ်မှာ SNS တွေအသုံးများလာတဲ့ ကိစ္စပါပဲ..
အားလုံးက Network တခုဖြစ်သွားတယ် ..တူရာစုကြတဲ့ Cluster အသေးလေးတွေ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့
ဧရာမ အစုအဖွဲ့ကြီး တခုဖြစ်သွားတယ်… ထိပ်ဆုံးကပြောခဲ့တဲ့ ပ၇ိုက်ဗေစီ သေပြီဆိုတာ
အဲ့သည့်မှာ စတယ်..ခည. အပြောင်းအလဲ ဆိုပါတော့ .သိတဲ့အတိုင်းအပြောင်းအလဲတိုင်းမှာ
ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ ရောပါနေမှာ လေ..။
ကောင်းတာကတော့ ..အရင်ခေတ်ကလို ငါဘယ်သူမှန်း ဘယ်သူမှ မသိပါဘူးကွာ ဆိုပြီး
လိမ်နေ ညာနေ လို့ မရနိုင်တော့ဘူး အစိုးရပိုင်းတွေ လုပ်ငန်းတွေ ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေပါ
လူလုံးထွက်ပြလာကြရတယ် … ပရိတ်သတ် လူထု နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ဆက်ဆံလာရတယ်
ဒီ Virtual World ပေါ်မှာပေါ့… အပြန်အလှန် transparency ရလာပြီး ပိုမြန်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့
ဆိုးတာပြောပါဆိုရင်တော့ ဆြာ့ ပိုစ့်ထဲပါတဲ့ Cyber Bullying ကိစ္စရပ်မျိုးတွေ ပေါ်လာသပေါ့…။
သည်တော့ ကောက်ချက်ချ.. ဟုတ်တာလုပ် မှန်တာပြော လိမ်လို့ ကွယ်လို့ ၀ှက်လို့ မရမယ့်ခေတ်
အချိန် ကို ရောက်လာပြီ… ဟိုးရှေးရှေးကလို သောက်ရမ်း ဂျွတ်တဲ့ တက္ကနစ်ရှင်တွေ ရှိမှတို့
ဧရာမ ဆာဗာကြီးထောင်ထားမှတို့ မဟုတ်တော့ဘဲ ..သိပ်မခက်ခဲဘဲနဲ့ Trace လိုက်လို့ ရနေပြီ
လို့ ဆိုချင်တာပါ….ကျုပ်တို့ အလကားသုံးနေတဲ့ e-Mail တွေ ချစ်လှစွာသော FB အပါအ၀င်
အခြားသော SNS တွေ .. Cloud နဲ့ အခြားအလကားရသမျှ Service တွေ ..ကုန်ကုန်ပြောရရင်
ကျုပ်တို့ သုံးနေတဲ့ ဖုံးတွေနဲ့ အဲ့ဒါတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် ထားမယ့် မိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်း တွေ ..
အဲ …ဆာဗာဘက်က ကြည့်နေနိုင်မယ့် IP Address တွေ Cookies တွေ နဲ့ Login Informationတွေ
သည်တော့ Virtual World ပေါ်က လူတယောက်ဟာ ပြင်ပလောကမှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာ
သိဖို့ မခက်တော့ဘူး ပေါ့ဗျာ..။
အခုလို အရှည် တကူးတက မန့်သွားတဲ့ ဗယာကြော်ပါ ဆြာဂီ
ခရီး သွားနေလု့် ဖုန်းထဲကပဲပြန်မန့်နေရလို့ အရှည်ပြန်မန့်တော့ဖူးနော် ခွေးလွတ်..
virtual world နဲ့ real world ဆက်စပ်ပုံကို အတွေးပေါက်ဖို့ အစဖော်ပေးတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်မယ်
မိဆိုလာ ဂဲ says:
အင်းသတိထားနေကြတော့ ဆိုလာ ဂေဇတ်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာ…………………………..